Nasiana fanitsiana tanteraka io tetibolam-panjakana 2019 io satria saika nampidinina avokoa ireo fandaniam-bola ary nofoanana mihitsy aza ireo tsy mazava. Nojerena antsipirihany mihitsy ny fandaniam-bolan’ny minisitera tsirairay ary ny praiminisitra no nanadina. Nohadihadiana tsara raha mitombina sy tena nilaina marina ireo fandaniana. Tsikaritra tao fa misy amin’ireny ny misoratra ao fotsiny tahaka ny fividianana fiara sy ny fitaovana informatika izay tsy mitombina ny ankamaroany, izany hoe ahiana ho nisy trangana fanodinkodinam-bola. Tahaka izay koa ny filazana famoaham-bola hanamboatra na hanavao tranom-panjakana, izay misy zavatra mampiahiahy maro. Hatramin’izay dia ny minisiteran’ny fitantanam-bola hatrany no manana tetibola ambony indrindra saingy maro ny fandaniana tsy voaporofo sy tsy voamarina tao ka nahena. Nampidinina ihany koa ny an’ny andrim-panjakana any amin’ny foibe ary nakarina ny any amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana.